Tilmaamaha Safarka Beytlaxam Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Beytlaxam (Carabi: بيت لحم, Beyt Lahm Cibraaniga: בית לחם Beit Lechem) waa magaalo yar oo ku taal meel 10 km (6 mayl) koonfur ka xigta Magaalada Qadiimiga ah ee Qudus oo ku dhex taal Daanta Galbeed, kuna taal aag "A" ah oo ay maamusho Maamulka Falastiin.
"Magaalada yar" ee Beytlaxam, oo lagu xusay tiro ka mid ah carolsmas-ka kirismaska, waxay soo jiidataa dadka adduunka u socdaalaya iyada oo lagu saleynayo qeexitaankeeda Axdiga Cusub (iyo gaar ahaan Injiillada) halka uu ku dhashay kitaabiga ah ee ciise, oo Masiixiyiintu rumaysan yihiin inuu yahay Masiixa iyo Wiilka Ilaah. Ku Kaniisadda Nabiga, mid ka mid ah kaniisadaha ugu da'da weyn adduunka, ayaa ah diiradda cibaado Masiixiyiinta ee magaalada dhexdeeda. Falanqaynta qoraalka casriga ahi waxay guud ahaan gartay in Naasaret, oo ahayd meeshii uu Ciise ku qaatay noloshiisii ​​ugu dambaysay iyo magaaladii uu ku dhashay ee Yuusuf iyo Mary ay u badan tahay inuu ku dhashay, laakiin taasi kama yaraynin isku aadka magaaladan dadka Masiixiyiinta ah ee xujaajta ah.
Beytlaxam sidoo kale waa laga qadariyo Yuhuudda iyo Muslimiinta halka ay ku dhalatay iyo magaalada Daa'uud, Nabiga kitaabiga ah iyo Boqorka Israa'iil, iyo sidoo kale goobta dhaqameed ee Qabrigii Rachel (oo ku taal bannaanka magaalada).
In kasta oo ay sidoo kale hoy u tahay muslimiin badan, Beytlaxam weli waxay hoy u tahay mid ka mid ah bulshooyinka ugu badan ee Masiixiyiinta Carabta ee Bariga Dhexe (inkasta oo muhaajiriin badan ay haajireen sanadihii la soo dhaafay, taasoo keentay aqlabiyadda muslimiinta) iyo mid ka mid ah kaararka ugu waaweyn ee tusayaasha dhaqanka iyo dalxiiska bulshada Falastiin. Beytlaxam agglomeration sidoo kale waxaa ka mid ah magaalooyinka yaryar ee Beit Jala iyo Beit Sahour, kan labaadna wuxuu leeyahay muhiimadda Baybalka.
Dhisida ilaa Millennium-ka sanadka 2000, Beytlaxam waxaa ka socday mashruuc ballaaran oo inta badan laga maalgeliyey shisheeye Beytlaxam 2000 iyadoo rajo laga qabo in Beytlaxam loo rogo meel dalxiis oo aad u weyn oo u dhiganta meelaha la tago sida Qudus ama Tel Aviv ee kaabayaasha dalxiiska. Nasiib darro sannad kadib, kacdoonkii Falastiiniyiinta ee looga soo horjeeday qabsashadii Israa’iil ayaa dhacay iyo rabshadihii ka dhashay, oo ay ku jiraan is-maandhaafka u dhexeeya dagaalyahannada Falastiiniyiinta ee ku xareysan Kaniisadda Dhalashada iyo ciidamada Israel, ayaa fashiliyey dadaalladaas dalxiis. In kasta oo xiisadda weli ka taagan tahay xiriirka Israa’iil iyo Falastiin, haddana rabshaduhu waa wax la soo dhaafay Beytlaxam, qaar badan oo Beytlaxam ka mid ahna waxay rajaynayaan inay ka sii socdaan halka Beytlaxam 2000 ay ka bilaabeen.
Mas dheer oo magaalada ah, wadada ugu weyn ee Beytlaxam waa qabaal Street kaas oo ka bilaabma Qabrigii Raaxeel (iyo waddada Yeruusaalem ku taal) ilaa laga gaadho Fagaaraha Manger, barta bartamaha magaalada. Fagaaraha Manger waxaa dhinac taagan Kaniisadda Nabiga hal dhinac iyo Masaajidka Cumar dhinaca kale. Magaalada Qadiimiga ah iyo souq (suuqa), oo sida ugu fiican loogu lugeeyo lugta, buurta ka fidi Fagaaraha Manger.
Magaca macnihiisu waa "Gurigii Kibista" ee Cibraaniga, iyo "Guriga Hilibka" oo af Carabi ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa inay u badan tahay in labada macneba dib loogu habeeyay wixii markii horaba ahaa gurigii Lachma, ilaahii Mesobotamiya ee taranka. Aagga waa la degay ilaa 5,000 BC waxaana jira caddayn in magaalada lagu xusay waraaqaha Amarna ee Masaarida (1400 BC). Buugga Axdiga Hore ee Ruth (c. 1150 BC) wuxuu leeyahay tixraacii ugu horreeyay ee sugan Beytlaxam; waxay ka warrameysaa sheekada Nimco, oo ka tagtay Beytlaxam xilligii abaarta, oo markii dambe la soo noqotay iyadoo ay sodohdo Ruud. Sidaas oo ay tahay, Beytlaxam weli waxay ahayd magaalo yar oo hooska Yeruusaalem hoos ah, sida qiyaasaha badankoodna ay haysteen ilaa 300 ilaa 1000 qof oo deggenaa xilligii ay Beytlaxam caanka ku siisay, oo ah dhalashadii Ciise.
Waxoogaa la yaab leh, marka laga reebo in la xuso in Dhalashadu dhab ahaantii halkaas ka dhacday, Axdiga Cusubi wuxuu iska indhatirayaa Beytlaxam. Wax walbana isla markiiba isma beddelin intaas ka dib: waa burburay xilligii kacdoonkii Bar-Kochba (132-135 AD), Roomaanku waxay ka sameeyeen Adonis goob cibaado-dhalasho ah. Kaliya 326 ayaa la dhisay kaniisaddii ugu horreysay ee Masiixiyiinta, markii Helen, oo ahayd hooyadii boqortooyadii ugu horreysay ee Masiixiyiinta, Constantine, ay booqatay Beytlaxam. Intaa ka dib si tartiib tartiib ah ayey u kortay laakiin si isdaba joog ah ayey u gaadhay, iyada oo ku gaadhay heerkeedii ugu sarreeyay sidii magaalo adag oo deyr leh xilligii Crusader, laakiin Cusmaaniyiintu waxay dumiyeen qalcadihii waxayna yareeyeen Beytlaxam tuuladii ay ahayd 2000 sano ka hor.
Dib udhaca wuxuu cadeeyay oo kaliya kumeelgaar ah, inkasta oo qaska uu socday qarnigii 20aad magaaladu (ilaa 2000) ay ku kortay dad lagu qiyaasay 184,000. Bishii Diseembar 21, 1995, Beytlaxam waxay ka mid noqotay meelaha ay sida buuxda uga taliso maamulka Falastiiniyiinta. Magaalada, dadka ku nool 41% waa Masiixiyiin, halka 59% ay Muslim yihiin. Masiixiyiintu waxay ahaan jireen aqlabiyad aad u tiro badan, laakiin tiradooda ayaa hoos u dhacday dhammaan qarnigii 20-aad. In kasta oo Carabigu yahay luqadda dadka deggan Beytlaxam, haddana Ingiriisiga, Faransiiska iyo luqado kale ayaa si ballaadhan loogu hadlaa loona fahmaa dad badan oo Beytlaxam deggan.
In kasta oo Beytlaxam ay tahay magaalo Falastiiniyiin ah, haddana waxay u jihaysan tahay dalxiis. Sababtoo ah awooda weyn ee Beytlaxam oo ah soojiidashada dalxiiska, Maamulka Falastiin wuxuu joogteeyaa joogitaanka booliska dalxiiska joogtada ah ee magaalada. Tusaale ahaan, haddii dagaal ka dhaco Koonfurta Israel iyo Marinka Gaza, taasi macnaheedu maahan in safarada lagu tagayo magaalooyinka kale ee Falastiiniyiinta sida Beytlaxam aysan ammaan ahayn. Beytlaxam waa meel aamin ah oo dalxiisayaashu ku soo booqdaan, iyo tirooyinka dalxiisyadu waxay ku sii kordhayaan jawharadan qarsoon ee dhulka barakaysan.
Inta badan socotada waxay soo maraan Qudus. Maaddaama Beytlaxam ay maamusho Maamulka Falastiiniyiinta, waxaa jira baaritaanno amni oo ay sameeyeen militariga Israa’iil waddooyinka soo gala. Markaad soo socoto wadada weyn ma jiraan wax caqabad ah markaad tagayso Beytlaxam, si kastaba ha noqotee dhinaca kale waxaa jira isbaaro 60 wadada Yeruusaalem. Tusaale ahaan haddii aad ku safreyso bas, askartu waxay fuuli doonaan si ay u hubiyaan dukumiintiyada aqoonsiga rakaabka. Wadada maxaliga ah ee woqooyi ka xigta Beytlaxam, waxaa jira isbaaro ka weyn (“Isgoyska Rachel” / Isbaaro 300). Si aad u gudubto, mid ayaa muujinaya baasaboorkiisa / keeda askari Israel ah, boorsooyinkiisa / keeda gelinaya mashiin raajo ka dibna maraya qalabka baarista birta, sida amaanka garoonka. Sida dhammaan meelaha ay maamusho Maamulka Falastiiniyiinta, sharciga Israa’iil wuxuu ka mamnuucayaa muwaadiniinta Israa’iil inay soo galaan haddii aysan oggolaansho ka helin Maamulka Madaniga ee Israa’iil. Dalxiisayaashu waa u xor inay soo galaan ama ka baxaan Beytlaxam oo ku noqo Yeruusaalem inta jeer ee ay jeclaan lahaayeen iyadoon wax xaddid ah lahayn. Hubso inaad la timid baasaboorkaaga fiisaha dalxiis ee ay soo saartay Israel si aad u gasho ama uga baxdo aagga Falastiin.
Ugu safri Beytlaxam baabuur
Ka taxaddar markaad isticmaaleyso gaari la kireystay, maadaama qaar / shirkado badan oo kiro ah oo ka jira Israel ay caddeeyaan in gaariga loo isticmaalayo, oo uu ku sii jiro dhulka Israel.
Laga soo bilaabo Ramallah tagaasida badan ee la wadaago (sherut / servees) waxay u baxaan Beytlaxam. Waa wax yar oo xanuun in la ogaado meesha baska saxda ah laga soo qaado (ugu yaraan) afarta ku yaal Ramallah. Safarku wuxuu qaadanayaa qiyaastii saacad, wuxuuna ku socdaa dhammaan hareeraha Qudus wuxuuna ku kacayaa ₪ 20.
Safarka ka imanaya Xebroon ee joogsiga ugu dambeeya ee sagxadda hoose ee istaanka basaska Beytlaxam (kaliya tagaasida la wadaago (sherut)) ayaa kuugu geyn doonta wax ka yar ₪ 10.
Jericho ka qaad tagsi wadaag ah (sherut / servees) oo ah to 12 illaa Al Ezariya (Junction), oo ah magaalo / isgoys dhanka bari ka xiga Yeruusaalem, oo loo aqoonsaday Bethany oo ka timid Axdiga Cusub. Weydiiso darawalka halka uu ka baxo si uu Beytlaxam u tago ama u qaato tilmaamaha GPS jihayn ahaan. Isgoyska ka soo qaado tagaasida kale ee la wadaago ilaa saldhiga baska Beytlaxam (₪ 5-10).
Xujaaj u heellan badanaa waxay door bidaan inay socdaan (waqtiyada farxaddana waxaa jiray socod ballaaran oo Kirismaska ​​ah), xawaare xawli ku socda safarka waa la samayn karaa 2 saac laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo kor u kac iyo hoos u dhac ah iyo kuleylka xagaaga oo cabsi badan.
Meelo badan oo Beytlaxam ku yaal meel cag-dhig ah.
Laakiin Beytlaxam waa magaalo yar, sidaa darteed tagaasida tagaasida waa mid aad u jaban; ma jiro safar magaalada Beytlaxam dhexdeeda ah oo aan ka bixin wax ka badan ₪ 20. Si looga safro Beytlaxam ilaa xaafadaha u dhow ee Beit Sahour ama Beit Jala, waa inaysan ka badnaan ₪ 25-30. Kaliya iska hubso, inaad kaliya u adeegto raacida taksiga oo aan ahayn safar la hagayo, taas oo kugu kici doonta wax badan.
Si aad ugu safartid goob aad u fog (sida Herodium, mid ka mid ah monasteriyadaha ku xeeran, ama barkadaha Sulaymaan), waxaa lagugula talinayaa inaad kala hadasho qiimaha darawal taksi oo jooga rugta basaska ee Beytlaxam. Qaar badan oo taksiilayaal ahi waxay diyaar u yihiin inay ku geeyaan goob, halkaas ku sug intaad booqanayso goob ka dibna kuugu celinayaan Beytlaxam qiimo gorgortan ah. Mar kasta oo aad ka gorgortameyso qiimaha taksiga, marwalba waxaad dhahdaa qiimaha ugu hooseeya ee aad u maleyneyso inuu macquul ku noqon karo safarka, oo aad darawal ka gorgortamo halkaas. Darawalku wuxuu ku bilaabi doonaa sida ugu sareysa markuu u maleeyo inuu kugu soo dallaci karo isla markaana uu gorgortan kuu geli karo. Hubso inaad ku heshiiso qiimaha intaadan tagsi aadin.
Kaniisadda Nabiga (Laga soo bilaabo socodkii joogsiga baska ee ugu dambeeyay ee ka tagay wadada Pope Paul VI ilaa Manger Square. Dhammaantood way toosan yihiin, iska hubi inaad bidix uga kacdo kaniisadda Lutheran.). Shaki la'aan soo jiidashada ugu sareysa ee Beytlaxam, qalcad run ah ayaa laga dhisay qalcad-sida dusha sare ee godka uu Ciise ku dhashay Maryan. Waa kaniisadaha ugu faca weyn adduunka, waxaana lagu qoray UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka. Muuqaalkii ugu horreeyay ee dhismaha waxaa lagu dhisay amarro ka yimid Boqortooyada Boqortooyada Roomaanka Constantine I (Weyn) ee 330 CE. In kasta oo qaab-dhismeedka uu u dhigmo qorshooyinka Emperor Justinia laga soo bilaabo 540 CE (dhismihii ugu horreeyay ee lagu burburiyey rabshado 536), kaniisadda waxaa markii ugu horreysay si xoog leh u adkeeyay Crusaders ka dibna hoos u dhacday (inta badan dayacaad) hoos timaadda xukunka Mamluk. Dhulgariir 1834 iyo dab 1869 ma caawin. Maanta, qaabdhismeedku inta badan waa dhawaq laakiin xoogaa mugdi ah oo mugdi ku jiro muuqaal ahaan, kaliya ayaa isku dhegan Kaniisada Franciscan ee St Catherine (taariikhaysan 1881 iyo goobta sanad kasta Diisambar 24 saqda dhexe saqafka ballaadhan laga baahiyo adduunka) oo ku jirta qaab aad u fiican. Goobta la sheegay ee dhalashadii Ciise ayaa dhab ahaan ku taal god ku yaal kaniisadda (Kalkaalkii asalka ahaa ee uu ku dhashay Ciise wuxuu ahaa god, ma ahan daar, sida dadku u muujiyeen). Waxaa jira xiddig calaamadeynaysa meesha saxda ah ee uu ku dhashay Ciise godka dhexdiisa. Bakhaarka asalka ah ee leh xiddigta calaamadeynaysa dhalashadii Ciise ayaa loo yaqaan ' Grotto ee dhalashada, waxaana laga heli karaa gudaha kaniisada. (Qabriga fiqiga caanka ah ee deggan Beytlaxam ee St. Jerome, oo noloshiisa ku qaatay tarjumaadda Kitaabka Qudduuska ah, wuxuu sidoo kale ku jiraa godka leh Grotto.) Gelitaanka dhismaha oo dhan waa bilaash, laakiin xilliga sare (iyo gaar ahaan Jan 6th) ) u diyaargarow dadweyne fara badan iyo saacado sugitaan ah gelitaanka Grotto. Badanaa waxaa jira hageyaal-hageyaal dalxiis oo la aqoonsan yahay oo sugaya albaabka ama gudaha kaniisadda kuwaas oo bixiya safarro kooxo / shaqsiyaad, mararka qaarkood kuu oggolaanaya inaad ka booddid dadka. Waxay hubaal ka dhigeysaa in lagu heshiiyo qiimaha ka hor safarka, iyo haddii ballanqaadku ahaa in laga boodo dadka oo si toos ah loo galo crotto laakiin aan suurtagal ahayn mararka qaarkood, hoos u dhig qiimaha ugu yaraan kalabar. Haddii kale ha taageerin, maadaama ay caddaalad darro ku tahay martida kale ee sugaysa oo habka carabiga ee caadiga ah waa in aan la taageerin.
Qabrigii Rachel (Kala go'ay Beytlaxam derbiga). Goobta aaska ee aabbe Rachel, afadii Yacquub iyo hooyadii Yuusuf iyo Benyaamiin waa goobta labaad ee ugu muhiimsan taariikhda Beytlaxam. (Bilowgii 35: 19-20). Waa goob barakaysan ee diinta Yuhuudda, Masiixiyadda iyo Islaamka. Xaaladda amniga awgood, qaab dhismeedkii hore ee Qabriga waxaa ku hareeraysnaa qalcad Israa’iil, oo ka xirtay Beytlaxam. In kasta oo xabaashii asalka ahayd wali laga arki karo gebi ahaanba qalcadda dhexdeeda, helitaanka xabaasha ayaa hadda suurtagal ah oo keliya gaari, tusaale ahaan raacitaanka baska Egged ee ka yimaada Yeruusaalem ama adoo ku maraya jidka ugu gaaban.
Goobta Kaatooliga ee Beeraha Adhijirka ee Beytlaxam Beyt Sahour
Beeraha Adhijirka. "Intii adhijirradu ay daawanayeen adhigooda habeenki -" - meelaha iska soo horjeeda ee Beytlaxam xaafadeedka Beyt Sahour ayaa sheeganaya inay tahay goobtii booqashada malaa'igtu ugu tagtay adhijirrada ku xusan Injiillada.
Goobaha Shepherds Orthodox. Halkan waxaad sidoo kale ka heli doontaa qoditaanno furan oo laga helay kaniisaddii hore ee Byzantine.
Goobaha Shepherd (Latin).
Caano Grotto Chapel. Meeshii Maryan loo malaynayay inay ku daadisay dhawr dhibic oo caano naas ah markay quudinaysay Ciise sidii ay ku dhuumatay kahor Qoyskii Quduuska ahaa ee u baxsaday Masar, oo u rogtay godkii caanaha ee caanaha. Waxay furan tahay maalinta oo dhan. Budada cad ee laga soosaaray godka ayaa sidoo kale loo iibiyaa dawo bacrimin ah gudaha macbadka.
Masaajidka Cumar. Daily 10–11AM, 1:30–2:30PM, 5–7PM. Masaajid la dhisay 1860-kii oo si firfircoon loo adeegsaday. Taas bedelkeeda waa iska cad oo aan xiiseyneynin gudaha laakiin xoogaa quruxsan banaanka. free.
Barkadaha Sulaymaan. Sadex biyood oo waaweyn oo xardhan oo xilliyadii Herodian ah oo qaadi kara 160,000 m³ oo biyo ah. Waxay ku yaalliin geedo geed geedo ah oo qiyaastii 3 Km u jira Beytlaxam meel ku habboon oo lagu tamashleeyo oo loo yaqaan 'Artas Valley'. In Artas, sidoo kale waxaa jira amar aad u qurux badan oo Talyaani ah oo ah Walaalaha Maryan ee Beerta ayaa dhisay Kaniisada Hortus Conclusus iyo sidoo kale matxafka hiddaha iyo dhaqanka ee Falastiin. Tuulada Artas sidoo kale waxay ku faantaa xaflad saladh sanadle ah.
Ceelasha Boqor Daa’uud (Biyar Daoud). Ceelasha Boqorka David ee kuyaala wadada King David, eek u taal Manger Square, waa seddex ceel oo waaweyn oo laga qoday dhagaxa weyn ee Ras Eftais, oo ah waaxda bari ee Beytlaxam, taas oo calaamadeynaysa goobtii ay ciidanka Daauud ka jabeen xeradii reer Falastiin si ay biyo ugu keenaan; "Waxaan jeclaan lahaa in qof i siiyo biyo aan ka cabbo ceelka Beytlaxam" (2 Sam. 23:15). Waxaa dadka qaar aaminsan yihiin in Kaniisada ku xigta ee St. David ay tahay halka Boqorka lagu aaso (oo ka duwan qabriga dhaqanka ee Qudus). Ceelashu waxay heleen 1895. Kaniisaddu waxay dul taallay Necropolis aad u ballaadhan oo ka kooban 18 Arcosolia oo leh min laba illaa lix qabri. Qabuuraha wuxuu ahaa Christian sida ku cad qoraalka. Naadiga Kaatoliga ee Waxqabadka wuxuu ku yaal goobta mid ka mid ah ceelasha.
Fanka Banksy. The sawiro by Banksy oo ah farshaxan caan ah oo wali dahsoon ayaa soo jiitay dareenka warbaahinta adduunka oo dhan waana hubaal in loo fiirsado. Waxaa jira shaqooyin badan oo farshaxanno kale ah, oo lagu sawiray darbiga kala qaybinaya Beytlaxam iyo Qudus, sidoo kale, oo ay ku jiraan nooca Falastiin ee Guernica, sawirrada Leila Khaled, Ahed Tamimi, Razan al-Najjar iyo kuwo kaloo badan. Si taas loo arko, waa suurtogal in la kiraysto taksi halkaasoo darawalku uu sidoo kale hagi karo ama lug ku mari karo. Koonfur-bari ilaa woqooyi aragga waa:
Banksy: Nin tuuraya Ubax (Dhinaca bari ee Xarunta Shidaalka).
Banksy: Malaa'ig (Dhinaca koonfureed ee wadada, hoos u fiiri wadada darbiga ku taal dhamaadka bariga saddexda dukaan).
Banksy: Qoolley jaakad xabadda celisa (Isgoyska kaliya eeg naftaada).
Banksy: Gabadh hubinaysa askari (Waxay ku dhex taal dukaanka halkaas ku yaal).
Kaniisada Latin Patriarchate (Kaniisadda dhawaaqida) (in yar oo dhaafsiisan Taaboo bar). Kaniisad kale oo mudan in la booqdo. Midig agteeda, wadada, waxaad sidoo kale ka heli kartaa Kaniisadda Virgin Mary .
Old City. Sidoo kale waxay kufiicantahay socodka iyo dukaameysiga hadaadan horey u arag magaalo carbeed.
Kaniisadda St. George (Kaniisada Al Khader) (Qolka Al Khader, galbeedka Xarunta. St. George wuxuu u sameeyaa joogsi ku habboon waddada (gadaal) ee Yeruusaalem. Ka raaci baska 231 (kii ka yimid Yeruusaalem asal ahaan) Xarunta Beytlaxam, oo ka deg meesha ugu dambeysa ka hor barta koontaroolka ee xagga Yeruusaalem, asal ahaan ka hor intaadan marin jidka weyn ka dib markaad ka tagto Beytlaxam/Beit Jala. Halkaas waxay ka yar tahay 1 km-galbeed oo u jirta Kaniisadda/Kaniisadda.). St. George wuxuu ahaa Masiixi Masiixi ah oo aad muhiim ugu ah Masiixiyiinta Orthodox, sidoo kale Carabi loogu yeero "Mar Jeriess". Kaniisadda ayaa la sheegay inay haysato waxyaabo ka soo jeeda awliyada oo leh awood bogsiin-gaar ahaan cudurada maskaxda. Kaniisadda waxaa loo isticmaali jiray qarnigii 19aad xarun maskaxeed si loogu daaweeyo cudurada maskaxda iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha ka haray St George. Goobta ayaa sidoo kale lagu sharfay dhaqanka muslimiinta oo ah goobta loogu talagalay barashada nebiga Muslimka ah ee Al Khider. Bartamaha Abriil ama horraanta Maajo (waxay ku egtahay jadwalka Julian), magaalada (Muslimiinta iyo Masiixiyiinta labadaba) waxay u qabtaan xaflad St. George oo mudan in la arko.
Maxaa laga sameeyaa Beytlaxam
Muuqaalka ku xeeran Beytlaxam-wuxuu ku habboon yahay socodka!
Jaamacadda Beytlaxam. Waxay siisaa booqdayaasha inay la xiriiraan ardayda reer Falastiin si ay u helaan aragti nolosha xerada iyo Beytlaxam. Waxaa jira booqashooyin Jarmal ah oo malaha Ingiriis ah oo la heli karo.
Tug Dooxada Artas, oo la rumaysan yahay inay tahay goobtii hortus conclusus, ee Sulaymaan's Canticle ama Heesta Heesaha: "Adigu waxaad tahay sida beer la daboolay, walaashay, xaaskeygow, waxaad tahay sida il la xidhay. Beertaada ayaa ah janno lagu farxo. Artas waa uun tagaasid gaaban oo magaalada ka baxsan.
Qoob ka ciyaarka Cosmos caweeyo, oo ku yaal Beit Jala buurta dusheeda, ama Cheers ama Roots Lounge ee Beit Sahour.
Ka qayb qaado guryaha iyo fursadaha iskaa wax u qabso oo ay soo qabanqaabiyeen Hay'adda 'Holy Land Trust', sida Kulankii Xagaaga ee Falastiin oo qofku la joogi doono qoys martigelinaya 1-3 bilood, barashada luqadda Carabiga, tabaruceyaasha Beytlaxam, booqanaya magaalooyin kala duwan oo Falastiiniyiin iyo Israail isugu jira, lana kulmaya labada nabad-ilaaliye ee Israa'iil iyo Falastiin. .
Ku dabbaaldeg Kirismaska ​​Beytlaxam: ku qaad Kirismaska ​​magaalada ay wax walba ka bilowdeen! Beytlaxam waxay kuxirantahay qurxinta Kirismaska ​​xilliga Fasaxa. Hubso inaad ka soo qeyb gasho Masjidka saqda dhexe oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha kala duwan ee madaahibta dhulka masiixiga ee Kirismaska ​​iyada oo ay la socdaan kumanaan qof oo ajaanib iyo cibaado isugu jira oo isugu soo baxa Fagaaraha Manger oo ka baxsan Kaniisada dhalashada. Kirismasku waa sixir Beytlaxam, ma jiraan wax la mid ah! Xilliga Kirismasku waa waqtiga ugu xiisaha badan ee Beytlaxam la joogo, in badan oo ruuxi Kirismas ah ayaa ka jirta magaalada.
Safarada socodka ee bilaashka ah waa kuwo caan ka ah Beytlaxam waxaana heli kara hagayaal maxalli ah, oo leh aagag badan oo deegaanka ah, adag oo mararka qaarkoodna hal dhinac ah laakiin wali xiiso leh taariikh, oo ay ku jiraan aragtiyadooda la xidhiidha Beytlaxam dhexdeeda Raadinta internetka iyo waxyaabo badan ayaa soo bixi doona. Talooyinka waa la mahadiyey.
The Dhammaan Kafeega Ummadaha wuxuu abaabulaa gawaarida xagaaga halkaasoo caalamku ka baran karo dharka bulshada, siyaasadda iyo dhaqanka ee nolosha Beytlaxam iyo hareeraheeda.
The Quduuska ah Land Trust wuxuu abaabulaa safarro magaalooyin badan oo Falastiin ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha siyaasadeed iyo kuwa dalxiisayaasha diinta ah. Waxay sidoo kale awoodaan inay la abaabulaan guryo-hoosaadka qoysaska deegaanka ama fursadaha tabaruca muddada-gaaban / muddada-dheer ee aagga Beytlaxam ee ka-qaybgalayaasha doonaya.
The Kulliyadda Baybalka Beytlaxam waxay bixisaa barnaamijyo iyo koorsooyin Ingiriis iyo Carabi ah oo ku saabsan Daraasaadka Baybalka iyo Fiqiga ee Dhulka.
Wax ka iibsiga Beytlaxam
Dukaan udgoon oo kutaala Beytlaxam
In kasta oo tuugga Beytlaxamku aad uga yar yahay kan Yeruusaalem, haddana aad buu uga yar yahay dalxiisayaasha, kuwa wax iibiyaana way ka dagaal yar yihiin, aad bayna saaxiibtinimo u leeyihiin, qaar badani xitaa waxay siiyaan macaamiisha mustaqbalka kafee iyo shaah. Maamulka Falastiiniyiinta kama qaado canshuurta iibka, sidaas darteed dukaanleyda Beytlaxam waxay aad uga yar yihiin waxyaabaha xusuusta leh. Beytlaxam waa meel ku habboon in lagu tababaro xirfadahaas gorgortanka ah ee aad rajeyneysay inaad tijaabiso !!
Waqtiyada nabada, ganacsatada Beytlaxam waxay sameeyaan ganacsi qaylo badan oo xusuus ah oo loogu talagalay xujaajta magaalada. Xaaladda hadda jirta, hawlwadeenada dalxiisyaashu waxay doorbidaan inay si deg deg ah uga careysiiyaan kooxahooda la hagayo gudaha iyo dibedda Kaniisada Dhalashada iyaga oo aan u oggolaan iyaga waqti ay ku eegaan hareeraha Manger Square. Badanaa, dhammaadka safarka, waxay geyn doonaan kooxahooda dukaanno xusuus ah oo horay loo xushay waxayna ku dallacayaan milkiilaha dukaanka guddi weyn oo loogu talagalay iibka loo sameeyay kooxda dalxiiska. Taas macnaheedu waxa weeye dukaamada yar yar ee xusuusta halkan ku duceysan inay xor ka yihiin xujeyda, iyo sidoo kale in dukaamada yaryar ay aad ugu baahan yihiin ganacsi. Iyagu weli, si kastaba ha noqotee, waxay si aad ah uga dhib yar yihiin iibiyeyaasha Yeruusaalem. Dukaamada xusuusta ee Beytlaxam aad bay uga badan yihiin, aadna uga jaban yihiin Yeruusaalem - isla xulashadaas (waxaa la yaab leh, dukaamo badan oo xusuus ah Beytlaxam xitaa waxay leeyihiin waxyaabo xusuus ah oo Yuhuudi ah). Mid waa inuu ku dhiiradaa fagaaraha Manger ilaa dukaamada xusuusta qabaal Street iyo waliba suuqa kuyaala agagaarka Fagaaraha Manger ee Masaajidka Cumar agtiisa. Ku dukaamo yar yar oo xusuus leh ayaa bixiya heshiisyada ugu fiican iyo adeeg aad u saaxiibtinimo badan. Beytlaxam waa meel aad u fiican oo laga helo dhammaan waxyaalaha xusuusta leh ee Dhulkaaga Quduuska ah wax badan, oo aad uga jaban sidii aad ku heli lahayd reer binu Israa'iil. Haddii qiimaha lagu qoro USD, waa qiimo jaban oo loogu talagalay dalxiisayaasha, markaa ha ka waaban inaad ka soo iibsato qiimo aad u hooseeya (waxaad had iyo jeer heli doontaa qiimo hoose haddii aad weydiisato).
Safarkaaga kaniisada Milk Grotto, raadi warshad Olive Wood oo ku taal Milk Grotto Street. Ragga halkaas jooga waxay ku siin karaan booqasho aqoon isweydaarsigooda ah waxaadna arki kartaa sida ay waxyaabo ugu xardhaan geedo saytuunka ah. Qoys masiixiyiin ah oo aad u saaxiibtinimo, waxayna sidoo kale leeyihiin dukaan hadiyadeed, halkaas oo aad ka heli karto hadiyado runtii u gaar ah. Sidoo kale waxay leeyihiin dukaan kale oo hadiyado ah oo ku yaal Manger Square oo ku dhegan dhismaha xarunta nabadda.
Sidoo kale Waddada Milk Grotto waxaa ku yaal dhowr dukaanno xusuus ah oo lagu iibiyo hadiyado diimeed kala duwan. Waxaan ka helay Dukaanka dhalashada Tabash saaxiibtinimo, oo aan riix lahayn, oo diyaar u ah inaan qiimo dhimis sameeyo. Waxay sidoo kale ku siin doonaan kafee Turki ah oo bilaash ah.
Booqo mid ka mid ah afarta Beytlaxam xeryaha qaxootiga farsamooyinka gacanta ee Falastiiniyiinta, saabuun saliid saytuun ah oo gacmo lagu sameeyay, iyo daabac qurux badan.
Beytlaxam xusuus (Dukaanka hadiyadaha Christian / dukaanka elektaroonigga ah), Yeruusaalem - Wadada Xebroon (By Qabriga Rachel),. Ku soo dhowow Beytlaxam xusuusta - Hadiyadaha Masiixiyiinta - Waxay bixisaa hadiyado Masiixi ah sida alwaax saytuun ah, iskutallaab, lacag, dahab, Ceramic ka Falastiin
Dukaanka Hadiyadaha Christian (Hadiyadaha Christian), By Qabriga Rachel (Xebroon Road),. Waxay iibisaa alaab xusuus ah oo Masiixi ah, qayb ka mid ah Beytlaxam si aad ula wadaagto qoyskaaga iyo asxaabtaada. Waxyaabo badan oo ku kaydsan xulasho gaarsiinta adduunka oo dhan.
Dukaamada dahabka ee suuqyada (ka soo horjeedka fagaaraha Manger ee la dhaafayo Masjidka Cumar). Bariga Dhexe waxaa lagu yaqaan tayo sare, dahab qurux badan iyo dahab. Beytlaxam waxay leedahay dukaamo runtii qurxoon oo qurxoon oo iibiya dahabka carat dahabka dahabka ah oo runtii aad iyo aad u jaban Tani waa fursad aad ufiican oo lagu helo dahab karat sare ah (ilaa 22 carat) qayb yar oo kamid ah waxaad kubixin laheyd gurigaaga !!
Xagee laga cunaa Beytlaxam
Xarunta Nabadda, Fagaaraha Manger - qiimo aad u fiican iyo cunno wanaagsan iyo khamriga 'Kancaan' ee deegaanka. Nadiifi oo hawo ku fadhiiso fadhiga banaanka iyo banaanka.
Shepherds Valley Village - Makhaayada Teendhada, Beet Sahour. Meel u dhow beerta Adhijirka.,. Cunto wanaagsan oo maxalli ah oo bannaanka ah ama teendho xilliga qaboobaha. Aragtiyo wanaagsan dooxada oo dhan.
Makhaayada Mundo, qabaal Street (oo ku taal Wadada Weyn, oo aan ka fogeyn Fagaaraha Dhalashada),. 11 AM-11PM. Makhaayada Mundo waxay sameysaa pizza ugu fiican Beytlaxam. Makhaayada waxay bixisaa jawi saaxiibtinimo qoys leh (iyo muuqaal aad u fiican).
Makhaayada Citadel, Beith Sahour. Cunnada maxalliga ah iyo biirka Taybeh ee ku yaal dhisme duug ah Beytlaxam oo ay weheliyaan shaqaale saaxiibtinimo leh.
Random falafel wuxuu istaagaa ka soo horjeedka Kaniisada dhalashada. Ku wajaha Xarunta Nabadda oo leh Kaniisadda dhalashada midigtaada, waxaa jira istaag falafel ah oo geeska ah, oo leh makhaayad dhulka hoostiisa ah. ₪ 8 loogu talagalay rooti falafel iyo soodhada Fanta. Sidoo kale wuxuu leeyahay shwarma iwm Qiimo aad u cadaalad ah, gabi ahaanba lagu qanco.
Makhaayada Bonjour & Kafeega, Wadada John Paul II. 9 AM-11: 30PM. Waxay ku taal meel u dhow Jaamacadda Beytlaxam (bartamaha Beytlaxam), "Bonjour" waxay ku siisaa cunno cunno caalami ah (oo leh carbeed carab ah) meel casri ah, nasasho leh. Waxaa iska leh laba dhalinyaro Falastiiniyiin ganacsato ah, Bonjour wuxuu leeyahay WiFi bilaash ah, kafee weyn, iyo menu soo jiidasho leh. Carabi, Ingiriis, iyo Cibraaniga ayaa lagu hadlaa.
Xiddigaha iyo Bucks Cafe (buurta ka hooseysa Kaniisadda dhalashadeeda). Burburintaan Starbucks waxay bixisaa cabitaanno qaabeysan oo Starbucks ah iyo sidoo kale cunto fudud oo Carabi ah. Waxay sidoo kale u adeegaan jalaato-guriga lagu sameeyo oo aad u wanaagsan!
Makhaayada Afteem (dusha sare, geeska dhaadheer ee Manger Square). Haddii aad jeceshahay falafel, hummus cusub oo macmal ah, iyo cunto kale oo carabi ah oo dhadhan… .WAA INAAD booqataa makhaayaddan! Malaha mid ka mid ah dukaamada ugu fiican ee falafel ee Falastiin ama Israel. Falafelku aad ayuu u wanaagsan yahay, dukaamada waxay ka yimaadaan meel fog sida Haifa si ay u iibsadaan isku darka ceyriin.
Abuu Shanab (Wadada Garaaca),. Cunnooyinka ugu fiican magaalada, oo ay u adeegaan laba walaalo ah oo shaarubaha cajiibka ah leh. Maaddooyinka cusub iyo hilibka waa la jarjaray oo lagu hor diyaariyay iyadoo la adeegsanayo habab dhaqameed. Makhaayada waxay soosaaraysaa shahaadooyin sheegaya inaad halkaas wax ku cuntay.
Dar Jdoudnah (ka baxsan fagaaraha Manger),. Bar fiican oo leh cunto fudud, gaar ahaan Sambusek (keega dufan-iyo-jiiska). Magaca macnihiisu waa “Awoowgeen Awoowgiis”, gidaarrada waxaa ka buuxa sawirro qiiro leh oo ku saabsan Beytlaxam duug ah
Kafee Bon Jour (ku dhow Jaamacadda Beytlaxam). Makhaayad nooc cusub oo reer galbeed ah oo ku dhow Jaamacadda Beytlaxam. Iyada oo muuqaalkeeda qurxoon iyo jawiga deggan ee Bon Jour ay si dhakhso leh u noqotay joogitaan caan ah. Kafeega waxaa caan ku ah xulashada ballaaran ee kafeega iyo quraacdiisa subaxa hore.
Dukaanka Hilibka Doofaarka Beit Jala (magaalada hoose Beit Jala). Ku hungoobay hilib doofaar cusub oo ku yaal Dhulka Barakaysan? Kawaanka hilibka doofaarka ee Beit Jala ayaa ah mid naadir ku ah dhulka aysan muslimiinta iyo Yuhuudduba cunin hilibka doofaarka. Macaamiilku waxay ka yimaadaan Tel Aviv !!
Fadhiga Gidaarka (oo u dhow albaabka Beytlaxam). Makhaayaddan aadka wax u soo saarta ayaa astaan ​​u ah rajo beelka, xayiraadda weyn ee Israa’iil ka kala saaraysa Beytlaxam iyo Yeruusaalem, waxayna u beddeleysaa hanti ganacsigiisa. Liiska maqaayada waxaa lagu dhajiyay calaamado aad u weyn oo ku dheggan caqabadda sidoo kale, ciyaaraha kubbadda cagta habeenkii waxaa lagu saadaalinayaa shaashad weyn oo borojektar ah oo darbiga la dul dhigayo si ay dadku uga daawadaan miisaska banaanka. Meeshani waa wax badan oo xiiso leh in la cuno, la cabbo, oo laga daawado qaar ka mid ah isboortiga shaashad weyn oo ah "filim-tiyaatar" shaashadda borojektar!
Rooti R Us (wadada weyn ee Beytlaxam). Makhaayadani waxay u adeegtaa “yoga qabow” (yogurt la qaboojiyey), jalaato (labadaba carab-jalaatada iyo gelato joogto ah), koobabyo, sandwiches, caano-gariir, iyo inbadan.
Halkee lagu joogaa Beytlaxam
Dhibaatada helitaanka meel la joogo sida ay la kulmeen Maryan iyo Yuusuf muddo dheer baytamiya. Waxaa jira xulashooyin badan oo aad kala dooran karto. Sababtoo ah Qudus badanaa waa halka dalxiisyaashu joogaan halkii Beytlaxam la odhan lahaa, hudheelada Beytlaxam waxay bixiyaan qiimo aad uga jaban kuwa hoteelada Israel si ay ugu soo jiitaan dalxiisayaasha inay joogaan Beytlaxam halkii ay maalin uun u tamashleyn lahaayeen goobaha taariikhiga ah ka dibna si dhakhso leh ugu noqon lahaayeen Israel. Gorgortanka qiimaha jaban ee huteelka ayaa badanaa ka shaqeeya Beytlaxam. Xor ayaad u tahay inaad email / taleefan u dirto hudheello badan oo Beytlaxam ah si aad u hesho tixraacyo oo aad isbarbar dhigto sicirka, waxay xaqiiqdii kuu badbaadinaysaa lacag halkii aad ka dagi lahayd hudheel Qudus qaali ah.
Guriga Nabadda, Wad Macaali, Saff St. 10 (oo ku xigta Malhamet inyaz, oo ku dhow fagaaraha manger),. Qolka jiifka laga bilaabo ₪ 80.
Hotelka Al Salam, qabaal Street (Ka soo horjeedka Kaniisadda dhalashada),. Hal ka ah ₪ 132.
Hostel Bunksurfing, AlDawha al-hurreya Str (ama 10 daqiiqo oo gaadiidka dadweynaha ah ama 20 daqiiqo oo laga socdo bartamaha magaalada Beytlaxam iyo joogsiga basaska Qudus),. Is xaadiri: 22: 00, baadhid: 10: 00. Guri miisaaniyadeed oo hooseeya oo ku yaal dhulka barakaysan oo leh milkiile saaxiibtinimo leh oo saaxiibtinimo leh oo socodsiiya maalinle safarro kale oo socod ah Qolalka waa 8-sariir jiif, oo ay kujiraan qubeys, musqusha iyo irida tooska ah ee laga soo galo wadada dhamaantood hal qol, sidoo kale ma ahan tan ugu qadiimsan - waxay ubaahantahay in lala qabsado, laakiin qiimahan, qofna su'aal kama keeni karo . 40.
Hoteelka Walled Off, 182 Caritas St.,. Kani maaha Waldorf. Waxaa aasaasay Maarso 11, 2017 oo ah farshaxan caan ah oo caan ka ah waddada Bansky, tobanka qol ee hudheelku wuxuu ku faanaa "aragtida ugu xun ee hudheel kasta oo adduunka ah"… wuxuu si toos ah u wajahayaa darbi adag oo muran ka taagan oo ka soocaya Israa'iil iyo dhulka Falastiin. In badan oo ka mid ah bayaanka siyaasadeed marka loo eego qol ku yaal hudheelka ku yaal Beytlaxam, Walled Off Hotel waxaa ku jira madal iyo matxaf Laga soo bilaabo $ 30.
Qaar ka mid ah kuwan soo socda ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwo gaboobay:
Hotel Beytlaxam, Meel u dhow Isgoyska Manger St ee buurta dusheeda meel u dhow barta kantaroolka,, fax: + 972 2-2770706.
Grand Hotel (Haddii aad raacdo baska maxalliga ah 21 (iyo laga yaabee 124), basku wuxuu kugu dejin doonaa buur. Haddii aad kor u kacdo oo aad toos u sii wadatid, hudheelka ayaa ku yaal bidixdaada. Waxay leedahay waxa laga yaabo inay tahay makhaayad Mexico ku taal oo dusha sare ah, oo loo yaqaan 'Mariachi', laakiin sidoo kale waxay ka sarreysaa istaagga falafel). $ 50 US hal, laakiin haddii aad u egtahay qof socdaal miisaaniyadeed ah, waxay ku siin karaan ₪ 150..
Aaminaada Dhul Qudus, 529 Qafiska Wadada (Makhaayada Reem al Bawadi agteeda),. NGO-yada sida tan waxay bixiyaan guryo qiimo jaban, labadaba muddo gaaban iyo waqti dheer, qoysaska Falastiin. . 120.
Hotel Sahara (Beit Sahour, 1 mayl bari ee Manger Square. Taksi ku qaado ₪ 15).
Beit Al Liqa,. Kani waa xarun Christian Community ah oo ku taal Beit Jala. Waxay hoy siisaa dalxiisayaasha gurigeeda martida.
Guriga Martida Abu Jubran Lutheran (Agagaarka Kaniisadda Lutheran ee Kirismaska ​​iyo gudaha Dar Annadwa, Paul VI St.),. Touts ay "xarrago" hoyga iyo Xarunta Dhaqanka iyo Shirka Ad-Dar. 13 qol oo mataano ah / laba jibbaar ah oo leh musqulo qaali ah, kuleyl iyo qaboojiye, iyo TV-ga iyo Internet-ka
Al Anadulus Hotel (agteeda kaniisada dhalashada),.
Guriga Martida Beit Ibrahim,.
Guriga Martida ee El Beit (Beit Sahour),.
Hoteelka Everest (Beit Jala),. Hoteelku wuxuu ku yaalaa dusha sare ee buurta Beit Jala, oo fiirinaya magaalada Beytlaxam iyadoo leh aragti aad u fiican oo ku saabsan buuraha ku xeeran.
Dalxiis Dahab ah iyo Hoteel (Beit Sahour),.
Guriga Martida ee Golaha Rajada,.
Dalxiiska Dalxiiska ee Mourad,.
Huteelka Dhalashada Dhalashada,.
Hoteelka Jannada (oo ku taal Koontaroolka Beytlaxam),. Waxay ku taal irridda Beytlaxam, oo hal km u jirta Kaniisadda Dhalashada.
Guriga Martida ee Saint Vincent, john paul II wadada,.
Hoteelka Shepherd,. Mid ka mid ah buuraha galbeed ee Beytlaxam, oo u dhow waddada weyn ee Yeruusaalem-Xebroon.
Hoteelka St Antonio,.
Hoteelka St Nicholas,.
Guriga Martida ee Talitha Kumi,.
Tuulada Dalxiiska ee Zaituna,.
Hotelka Angel, Wadada Al-Sahel (Beit Jala),. Laga soo bilaabo ₪ 300.
Kooxda Dalxiiska Kala Duwan,. Waxay u habeysaa sariir & quraac qoysaska deegaanka, hordhac u ah martigalinta Falastiin. Asturnaanta waxaa lagu damaanad qaadayaa gelitaan gooni ah iyo musqusha martida.
Huteelka Mount David,. Hoteel cusub oo ku cusub bartamaha magaalada.
Grand Park Hotel Beytlaxam,. Dhowr daqiiqo oo loo socdo Kaniisadda dhalashadeeda iyo aagga laga adeegto. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Jacir Palace Hotel,. Huteelkani waa huteelka kaliya ee 5-xiddig leh ee ku yaal Beytlaxam. Diblumaasiyiinta ajaanibta ah ayaa inta badan ku nagaada hoteelkan sharaftiisa darteed. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Nambarada taleefannada ee dhulka Falastiin ayaa isticmaala mid ka mid ah laba lambar dal: +970 iyo +972, oo u dhiganta siday u kala horreeyaan Maamulka Falastiiniyiinta iyo Israa’iil habboon. Haddii lambarrada midkood uusan u shaqeyn doonin lambar, iskuday markale adoo adeegsanaya midka kale.
Inta badan magaalooyinka waaweyn ee Falastiin waxaa laga soo mariyaa boosteejada Basaska Beytlaxam ee tagaasida la wadaago (sherut) ee ku taal bartamaha Manger Street.
Meelaha dhow ee caanka ah ee Daanta Galbeed waxaa ka mid ah Jardiinada (Heroion) Park, Kaniisadda Mar Saba iyo Kaniisadda St. Theodosius.
Battir - deegaan ilaa 5 km dhanka galbeed ka xiga Beytlaxam waxaa ku qoran UNESCO Liiska Dhaxalka Dunida sida Falastiin: Dhulkii Saytuunka iyo Geedaha Canabka ah - Muuqaalka Dhaqanka ee Koonfurta Qudus.
Yeruusaalem - Marka laga soo tago Badda Dhimatay, waxay diiradda u saartaa dadka badankood ee imanaya gobolkan.
Gush Etzion - Jidka loo maro Xebroon, haddii aad ku jirto meelaha khamriga lagu cabiro, waa tan meesha loo socdo.
Nablus - Mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn adduunka oo caan ku ah kunafa / kenafeh. Haddii aad ku jirto jadwal ciriiri ah oo aad qorsheyneyso inaad tagto Ramallah (the Qolyihii fadhiga dowladda maamulka Falastiin iyo barta bilowga wanaagsan ee woqooyiga ka xigta Daanta Galbeed), waxaa laga yaabaa inaad u dhaafto tan dambe magaaladan xiisaha badan ee Falastiin.
Xebroon - Aaskii dhaqanka ee awoowayaasha kitaabiga ah ee Ibraahim, Isxaaq, Yacquub, iyo haweenkooda.
Jericho - Mid ka mid ah degsiimooyinka ugu da'da weyn adduunka iyo Bariga Dhexe, iyo bar bilow weyn Kalya Beach oo ku taal Badda Dhimatay. Tan dambe waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu caansan ee lagu arko / lagu sameeyo Israel iyo Jordan.
Negev iyo Judaean - lamadegaanka u dhow Badda Dhimatay, oo soo bandhigaya goobo yaab leh iyo dhul lama degaan ah, oo ay ku jiraan Mitzpe Ramon iyo laba god oo kale.
Nasiib darro lama helin kiro baabuur.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Falastiin > Tilmaamaha Safarka Beytlaxam Xalaal
Hagaha Safarka Nakhon Ratchasima Xalaal